Sitsalele umnxeba: +86 13167223337
I-Facial Skin Analyzer
Isihlalutyi solusu esiphathwayo
M11 uQhagamshelwano lweWifi
Umatshini we-ISEMECO we-High-end Skin Analyzer Show kuMboniso we-MEVOS e-Guangzhou
Ixesha lokuposa: Nov-29-2021
I-ISEMECO ngumatshini wokuhlalutya ulusu oluphezulu kwiingcali. Yenziwe kwaye yenzelwe yinkampani yaseShanghai Mayskin ngo-2020. Ineentlobo ezi-3 zeendlela zokukhanya-RGB, UV kunye nezibane zeCPL. Ngokusekelwe kwezi zibane ze-3, imifanekiso ye-9 inokuhlalutywa ekugqibeleni. Le mifanekiso ye-9 HD inganceda ukubala...Funda ngokugqithisileyo »
Indlela yokunyamekela kunye nokukhuselwa kwesikhumba ekwindla?
Ixesha lokuposa: Nov-22-2021
Njengoko imozulu ibanda, ulusu luya kuba phantsi koxinzelelo oluninzi ngenxa yokuhla ngokukhawuleza kweqondo lokushisa, ngoko kufuneka ligcinwe kwaye likhuselwe ngexesha. Ngoko, njani ukwenza ukunakekelwa kakuhle kwesikhumba kunye nokukhuselwa? 1. Ukukhupha ngenxa yemitha ye-ultraviolet eyomeleleyo ehlotyeni, i-stratum corneum yolusu...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: Feb-26-2021
Umhla we-15 wenyanga yokuqala yiNyanga yeLantern yaseTshayina kuba inyanga yokuqala yenyanga ibizwa ngokuba yi-yuan-inyanga kwaye kumaxesha amandulo abantu babebizwa ngokuba yi-night Xiao. Usuku lwe-15 bubusuku bokuqala bokubona inyanga epheleleyo. Ke olu suku lukwabizwa ngokuba yiYuan Xiao Festival kwiC...Funda ngokugqithisileyo »
Ixabiso lesicelo somhlalutyi wokwakheka komzimba ekulawuleni impilo
Ixesha lokuposa: Feb-05-2021
Ngophuhliso loluntu, ukuphuculwa okuqhubekayo kwemigangatho yokuphila kwezinto, ukuphuhliswa kobuchwepheshe bezonyango, imodeli yonyango yanamhlanje kunye nendawo yokuhlala yangoku, iimeko zokuhlala kwimpembelelo yezempilo, ukusinda kwabantu, ubomi, umgangatho wobomi obufunekayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni i-analyzer yokwakheka komzimba?
Ixesha lokuposa: Jan-25-2021
I-Body Composition Analyzer, ethathwa njengeyona mpumelelo ibalulekileyo kwishishini lezempilo. Inkqubo yoLawulo lweeNgcebiso zeMpilo yokuLawula, umcebisi wakho wezempilo, unikezela ngedatha yohlalutyo oluzimeleyo lwezempilo kumvavanyi ngamnye. Intshayelelo esisiseko kwiDigital Body Fat Analy...Funda ngokugqithisileyo »
Ungasifumana njani isixhobo esifanelekileyo sokunyamekela ulusu lwakho?
Ixesha lokuposa: Jan-15-2021
Kukho iintlobo ezimbini zohlalutyo lwesikhumba kwimarike, ungasifumana njani isixhobo esifanelekileyo? Uguqulelo lwe-iPad, uguqulelo lwePC. Inkqubo ye-iOS ye-iPad, ukusebenza okugudileyo ngakumbi, kunye nomthengi ukwenza uvavanyo, inokuthatyathwa i-iPad nanini na ukuya naphi na imiyalelo yohlalutyo lwabathengi...Funda ngokugqithisileyo »
Kufuneka ufumane nini uhlalutyo lwesikhumba?
Ixesha lokuposa: Jan-08-2021
Lo ngumcimbi oxhalabisa kakhulu abantu abaninzi abaxhalabele ukunyamekelwa kwesikhumba. Kanye ngenyanga yeyona nto ifanelekileyo. Nangona kunjalo ukuba uzimisele ngempilo yolusu lwakho kwaye ufuna ukwazi ukuba ingaba iimveliso ozisebenzisayo ziyasebenza na, emva koko ukuba nazo kabini ngenyanga kuqinisekisa ukuba ...Funda ngokugqithisileyo »
Itheko leKrisimesi likaMeicet
Ixesha lokuposa: Dec-28-2020
I-MEICET ngumniki wenkonzo yetekhnoloji yobuhle obukrelekrele ezinikele kubuhle be-R&D kunye neqonga lokuSebenza le-Intanethi yeZinto. Uphawu lwayo "MEICET" lugxile ekwenzeni ngokwezifiso kunye nokwabelana ngolwazi lobuhle bezonyango kunye nohlalutyo lolusu lwedijithali, olunikezela...Funda ngokugqithisileyo »
Kutheni sinyamekela ulusu lwethu?
Ixesha lokuposa: Dec-18-2020
Wonke umntu ufuna ulusu olusempilweni ukuze baye kwezona ndlela zidumileyo zokugcina ulusu lwabo lusempilweni. Nangona kunjalo, wonke umntu unohlobo olwahlukileyo lolusu kwaye eyona ndlela ilungileyo yokumisela uhlobo lwesikhumba sakho kukufumana uhlalutyo lobuchwephesha bolusu. Kukho iinzuzo ezininzi zohlalutyo olunjalo. Unga...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: Dec-04-2020
I-International Medicine ye-Anti-Aging kunye ne-Aesthetics Congress (IMAAC) eyenzeka e-Shenzhen, e-China, ngomhla we-4-6 kaDisemba, 2020. Emva kwe-edition yokuqala ephumelele kakhulu kwi-2017 kunye nabangaphezu kwe-4,000 abahambayo, siyavuya ukubuyela kwakhona e-Shenzhen kulo Disemba. . Injongo f...Funda ngokugqithisileyo »
I-ZIJIN International Congress ye-Aesthetic Surgery kunye neyeza
I-Zijin International Aesthetics kunye neNkomfa eHlangeneyo yeMedicine yenye yeenkomfa zeshishini eligunyazisiweyo kwintsimi yezonyango kunye ne-aesthetic, kwaye ikwayingqungquthela yomboniso wempumelelo yezemfundo eyaziwayo kwingingqi ye-Asia-Pacific. Inkomfa...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha lokuposa: Nov-27-2020
Yintoni umatshini wokuhlaziya ulusu? Luluhlalutyo lobuchwephesha lolusu kunye nomyalelo wemveliso olungiselelwe ukuchonga ukuphazamiseka kwesikhumba kunye notshintsho eluswini. Nje ukuba uhlalutyo lugqityiwe inkqubo iya kucebisa ngokuzenzekelayo iimveliso zonyango lwesikhumba kulawulo lwesikhumba olulungiselelweyo....Funda ngokugqithisileyo »
12 Okulandelayo > >> Iphepha 1/2
UMtshini we-ISEMECO Wokuhlalutya ulusu olukwinqanaba eliphezulu Sh...
I-ISEMECO ngumatshini wokuhlalutya ulusu oluphezulu kwiingcali. Yenziwe kwaye yenzelwe yinkampani yaseShanghai Mayskin ngo-2020. Ineentlobo ezi-3 zeendlela zokukhanya-RGB, UV kunye nezibane zeCPL. Ngokusekelwe kwezi...
Indlela yokukhathalela nokukhusela ulusu i...
Njengoko imozulu ibanda, ulusu luya kuba phantsi koxinzelelo oluninzi ngenxa yokuhla ngokukhawuleza kweqondo lokushisa, ngoko kufuneka ligcinwe kwaye likhuselwe ngexesha. Ngoko, njani ukwenza ukunakekelwa kakuhle kwesikhumba kunye nokukhuselwa? 1. Exfoliati...
Umhla we-15 wenyanga yokuqala yiNyanga yeLantern yaseTshayina kuba inyanga yokuqala yenyanga ibizwa ngokuba yi-yuan-inyanga kwaye kumaxesha amandulo abantu babebizwa ngokuba yi-night Xiao. Usuku lwe-15 lusuku...